Indlela ukupheka isifuba inkukhu kuhhavini ukuze ukhiqize namanzi, esihlwabusayo ithenda? Ukuze siphendule lo mbuzo, sizobe ukwethula wena iresiphi enemininingwane, engesiyo isikhathi futhi ayidingi ukusetshenziswa kwemikhiqizo ezibizayo.
Ukupheka inkukhu webele kuhhavini ngokushesha futhi kalula
amakhowe Fresh - 400 g;
amnandi onion isibani - 3 amakhanda;
chilled inkukhu webele - 900 g;
izaqathe Fresh naphakathi - 2 PC.
ukhilimu obukhulu - 60 g;
ukhilimu okunamafutha - 210 ml;
ushizi okuqinile - 155 g;
usawoti omncane, izinongo elimnandi, phansi allspice - engeza ukunambitha;
amafutha sunflower - 55-75 ml (ukuthosa).
Ngaphambi ukupheka isifuba inkukhu kuhhavini, kufanele zingatholakali kuzo ifomu esiqandisini noma eqandisiwe, bese kahle wageza, ebugqilini amathambo nesikhumba. Okulandelayo, kufanele ezimhlophe izinkukhu inyama uthathe izingxenye ezinkulu, ithebula usawoti ukunambitheka, ezinuka kamnandi, pepper elimnandi futhi ushiye ukuba marinate ngesikhathi ilungiselela ukugcwaliswa.
Ukucubungula amakhowe nemifino
Indlela ukupheka isifuba inkukhu kuhhavini ukunconywa futhi esihlwabusayo? Ukuze kuzuzwe lokhu imibono inselele Culinary uzodinga ukuthatha amakhowe fresh, ubageze kahle bese uthathe plate kanye imilenze. Kufanele ukuhlanza izaqathe kanye anyanisi, bazigcobe on a grater kanye nquma ngommese, ngokulandelana.
Ulungiselela ukugcwaliswa epanini
Juicy inkukhu webele kuhhavini Kuyophumela ethubeni flavorful futhi okumnandi, uma ukupheka nge yemifino sauce amakhowe. Ngenxa yalesi amakhowe imibengo makufakwe epanini, ukupheka usawoti kanye in juice ayo imizuzu 12. isikhunta Eminye zidinga uthele anyanisi, izaqathe kanye ucime kubo kuze ukuhwamuka ephelele umhluzi. Ngemva kwalokho, zonke izithako ukuba ukunambitheka amafutha sunflower kanye gazinga kuze brown golden (imizuzu 7-10). Ngemva kokuvala isitofu igesi eya esiteshini igesi kufanele engeza ukhilimu obukhulu futhi uhlanganise ngokucophelela.
Ekubumbeni futhi bayobhaka izitsha kuhhavini
Indlela ukupheka isifuba inkukhu kuhhavini etafuleni iholidi? Kunconywa ukuhlela isidlo kumnandi. Ngakho-ke, kuyadingeka ukuthatha ifomu ezijulile wokubhaka (ingilazi etholakalayo), nivame futhi ngobunono ukubeka webele pickled. Okulandelayo, inyama kufanele embozwe yemifino Usoso amakhowe, amboze ukhilimu kancane ophehliwe futhi ufafaze ushizi vukuza. Kulesi Ukwakheka, kubalulekile ukubeka isidlo kuhhavini osuke usushisa kakade imizuzu engaba ngu-35-42. Ngesikhatsi kulandzelwa lendlela, inkukhu propechetsya ngokugcwele futhi ubamba flavour ukugcwaliswa, kuzoba namanzi futhi ezihlwabusayo kakhulu.
Indlela ukwethula isidlo inyama etafuleni
Inkukhu umucu wabhaka ngaphansi imifino, amakhowe, noshizi cap kufanele akhonze ashisayo. Lokhu dish kungasetshenziswa njengendlela ukudla okuphelele noma ukwethula it nanoma dish side. Kunoma ikuphi, kutuswa ukuba ngaphezu kwalokho isicelo isinkwa, amakhambi fresh and isaladi ka nemifino eluhlaza. Bon appétit!